Mabhuku matsva: nhoroondo dzeupenyu, autobiographies uye mifananidzo yeupenyu | Bezzia
Zvinyorwa zvinyorwa: biographies, autobiographies uye mifananidzo yehupenyu
Maria vazquez | 29/04/2021 12:00 | Nhau, tsika nemagariro
Biographies, autobiographies uye memoirs vanotizivisa kumifananidzo yemhuri isiri nguva dzose yakakwana, hurema hwevanhu nekushungurudzwa, tsika dzemuno netsika dzekare dzenyika… Saka, tinowana vatsigiri vakasiyana siyana vatakafunga kuti tinoziva uye isu hatizive.
Isu tafamba iyo mabhuku kubva kuvaparidzi vakasiyana tichitsvaga zvinyorwa zvitsva zvinoenderana nechikamu ichi uye tawana zvakawanda kupfuura zvatingafungidzira. Ivo havasi vese zvavari, asi kana ivo vakamiririrwa, kana saka isu takaedza, kwakasiyana kunzwisisana nemadimikira.
1 Ini handina kuudza gadheni rangu futi
2 Amai Ireland
3 Baba vangu uye yavo miziyamu
4 Svetlana Geier, hupenyu pakati pemitauro
Ini handina kuudza gadheni rangu futi
Munyori: Pia Pera
Muparidzi: Errata Naturae
Bindu rakanaka muTuscany: kuda, kudzidza, nzvimbo yekuramba. Zvakare kurota, uko munyori Pia Pera akakwanisa kuzadzisa nekutenda kune purazi rakasiiwa: akagadzirisa kabhini achichichinja kuita imba izere nemabhuku, pendi nemidziyo; zvisinei, haana kana kupindira mumunda wemichero wakaukomberedza, uzere nemiti yemusango yaifamba imomo nekutenda kumhepo neshiri. Mazana emhando dzakasiyana dzemaruva, miti nemiriwo zvakapa iyo sango kutarisa kwakarongedzwa netumakwara mashoma.
Rimwe zuva, munyori anoona izvo chirwere chisingarapiki chinomutora zvishoma nezvishoma. Akatarisana nekushatiswa kwemuviri wake, zvishoma nezvishoma akamanikidzwa kusagadzikana kwemuti, gadheni, iyo nzvimbo iyo hupenyu hunomera uye uko "kumutswa" kunoitika, inova nzvimbo yake yekutizira. Nekuzvifungisisa, iye anoumba chisungo chitsva nezvisikwa uye anopa chiratidzo chehungwaru uye chinofambisa nezve zvinoreva hupenyu. Munyori anoteerera nekuzviteerera, uye anotaurira zvinoitika panguva yekushanya kwake kuchipatara, mifungo inomurwisa husiku, ndima dzinomuperekedza nekumunyaradza ... Anomanikidzwa nechirwere chake kuramba achiramba, haadaro rega kunzwa kuda kuziva uye hunyoro hwezvose zvakamukomberedza uye izvo zvakagara zvichishongedza kuvapo kwake: kwete chete maruva neshiri dzinogara mubindu rake, asiwo nekambani yembwa dzake, shamwari dzake, mabhuku, gastronomy ... «Zvino zvese zviri yakachena uye yakapusa runako », inotiratidza.
Munyori: Edna O'Brien
Ireland yagara iri mukadzi, dumbu, bako, mhou, Rosaleen, sadza, musikana, hure ...
Munyori anokunda mubairo we Country Girls anoruka nhoroondo yake yehupenyu - hudiki hwake mu County County, mazuva ake pachikoro chemasis, kutsvoda kwake kwekutanga, kana kutizira kwake kuEngland - nekwakakosha kweIreland, nyika yengano, nhetembo, mashura, yekare tsika, huchenjeri hwakakurumbira uye runako rwakanyanya. Amai Ireland vari, sekureva kweThe Guardian, “Edna O'Brien pakunaka kwake. Nhoroondo inokurudzira uye yakasarudzika yenzvimbo yechisikigo uye yeavo vanogara mairi, azere nekushinga uye nehungwaru.
Baba vangu uye yavo miziyamu
Munyori: Marina Tsvietáieva
Marina Tsvetaeva akanyora nhoroondo yeupenyu hwake panguva yeutapwa kuFrance ndokuiburitsa muRussia, muna 1933, mumagazini akasiyana muParis; makore matatu gare gare, mu1936, achiedza kuswedera padyo nevaverengi veFrance, akagadzirisa ndangariro dzake dzehudiki muFrench, seti yezvitsauko zvishanu izvo zvaakatumidza baba Vangu nemuseum yake uye izvo, zvisinei, zvisina kumboburitswa muhupenyu. Mumashanduro ese ari maviri akaunganidzwa muiri vhoriyamu munyori anopa a manzwiro uye lyrical evocation yemufananidzo wababa vake, Ivan Tsvetaev, purofesa weyunivhesiti uyo akapa hupenyu hwake kuvambwa kweMoscow Museum of Fine Arts, iyo yazvino Pushkin Museum. Kazhinji laconic uye zvakapatsanuka asi zvine simba risinganzwisisike renhetembo, ichi chinyorwa chinoshamisa, chine simba uye chinofamba, chinotiswededza padyo nehukama hwanyanduri asingakundike kupfuura vamwe vashoma.
Svetlana Geier, hupenyu pakati pemitauro
Munyori: Taja Gut
Muparidzi: Tres Hermanas
Kana hupenyu hukodzera chinzvimbo che "kudanana" icho chemushanduri Svetlana Geier. Akazvarwa muKiev muna 1923, akapedza hudiki hwake pakati pevamwe vevakangwara kwazvo munyika yake. Kuchenesa kwaStalin kwakapedza hupenyu hwababa vake uye, gare gare, panguva yekutapa kweGerman, akaona hutsinye hweNazi mushanduro yayo yeropa. Nekuda kwehungwaru hwake uye neyakajairika yakakosha dhiraivhu, Geier anozove iye akazova mushanduri ane hungwaru rwezvinyorwa zveRussia muchiGerman chezana ramakore rechiXNUMX. Shanduro nyowani yemanovhero makuru mashanu aDostoevsky yaive titanic basa raakakorona naro hupenyu hwebasa rekushandura uye zvinyorwa. Iyo yakajeka biography iyo inosanganisira akati wandei mabvunzurudzo akaitwa nemupepeti uye muturikiri Taja Gut naSvetlana Geier pakati pa1986 na2007.
Munyori: Emmanuel Carrère
Yoga ndiko kurondedzerwa mumunhu wekutanga uye pasina chero chakavanzika cheiyo kushushikana kwakadzika nemaitiro ekuzviuraya izvo zvakazoita kuti munyori aiswe muchipatara, akaonekwa aine bipolar disorder uye akarapwa kwemwedzi mina. Iri zvakare ibhuku rinotaura nezve dambudziko rehukama, nezve kushushikana kwepfungwa uye mhedzisiro Uye nezvehugandanga hweIslam uye mutambo wevapoteri. Uye hongu, neimwe nzira zvakare nezve iyo yoga, iyo munyori ave achidzidzira kwemakore makumi maviri.
Muverengi ane mumaoko ake chinyorwa naEmmanuel Carrère pana Emmanuel Carrère chakanyorwa nenzira yaEmmanuel Carrère. Ndokunge, pasina mitemo, kusvetukira munzvimbo isina chinhu pasina mambure. Kare kare munyori akasarudza kusiya ngano uye corset yemhando. Uye mune ino kupenya uye panguva imwechete basa rinoshungurudza, autobiography, zvinyorwa uye nhoroondo yezvinyorwa zvinopindirana. Carrère anotaura nezvake uye anoenda nhanho imwe kumberi mukutsvaga kwake kwemiganhu yezvinyorwa.
Ndeapi eaya ehupenyu hwauchatanga kuverenga? Wakaverenga here? Zviri pachena kwandiri kuti ndichatanga na "handisati ndaudza gadheni rangu izvozvi", asi handizive kuti ndeipi yedzimwe nhoroondo dzandichatevera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Nhau » Zvinyorwa zvinyorwa: biographies, autobiographies uye mifananidzo yehupenyu
Rongedza imba yako neiyo 20/10 nzira, ziva zvazvinosanganisira